Nipoaka ny hetsi-panoherana tao Bangladesh rehefa maty tany am-ponja ny mpanoratra iray voampangan’ny Lalam-Piarovana Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Nosamborina noho ny fitsikerany tao amin'ny media sosialy ny setriny amalian'ny governemanta ny areti-mandringana i Ahmed
Voadika ny 25 Avrily 2021 4:46 GMT
Olona nanohitra ny fahafatesan'i Mushtaq Ahmed maty tany am-ponja. Pikantsary avy amin'ny horonantsary YouTube avy amin'i Nagorik News.
Niteraka fihetsiketsehana vaovao manohitra ny Lalàm-Piarovana Nomerika – Digital Security Act (DSA) ny fahafatesan’ilay mpanoratra Bangladeshita Mushtaq Ahmed tany am-ponja tamin'ny 25 febroary, izay lalàna henjana loatra manameloka ny kabary an-tserasera izay anisan'ny niampangàna azy.
Nosamborina tamin'ny volana Mey tamin'ny herintaona i Ahmed, 53 taona rehefa avy nitsikera tao amin'ny media sosialy ny setriny amalian'ny governemanta ny areti-mandringana. Voampanga ho “manaratsy endrika ny firenena” sy “miteraka fifandirana, fankahalana ary fisaraham-bazana” izy – fanitsakitsahana voalazan'ny DSA avokoa izany rehetra izany.
Notazomina am-ponja vonjimaika ilay mpanoratra nandritra ny sivy volana farany teo ary in'enina nolavina ny fanomezana fahafahana vonjimaika azy. Nanjary narary izy tamin'ny volana lasa ary nafindra tany amin'ny hopitaly, ka fotoana fohy taoriana, nambara izy fa maty. Nilaza ny manampahefana fa antony voajanahary no nahafaty azy.
Fantatra tamin'ny fitazonana toeram-piompiana voay sy tamin'ny bokiny “Diary of a Crocodile Farmer” i Ahmed ary mpitsikera fatratra ny governemanta tao amin'ny media sosialy.
Nitaky famotorana momba ny anton'ny fahafatesany ireo fikambanana toy ny Committee to Protect Journalists (CPJ) na Komity Mpiaro ny Mpanao gazety (CPJ) sy ny Human Rights Watch (HRW) na Mpanaramaso ny Zon'Olombelona.
Nolaniana fotoana fohy talohan'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2018, ahitana sazy mavesatra sy sazy an-tranomaizina noho ny fandikan-dalàna toy ny “fanevatevana ny soatoavina ara-pinoana”, sy ny hafa ny DSA . Manome fahefana ny polisy hisambotra tsy misy didy fisamborana ihany koa io lalàna io, ao anatin'izany ny olom-pirenena ahiahian'ny manampahefana fa mety hanao heloka bevava amin'ny ho avy amin'ny fampiasàna ny media nomerika.
VAKIO IHANY KOA: Lazain'ireo mpiaro ny fahalalalahana miteny fa “masaka ho amin'ny fihoaram-pahefana” ny Lalàm-Piarovana Nomerika vaovao ao Bangladesh
Tao anatin'ny dimy volana voalohany tamin'ny 2020, niisa 403 ny fitoriana ary 353 no nosamborina noho ny fandikan-dalàna voalaza ao amin'ny lalàna, raha ny angom-baovao avy amin'ny polisy.
Nosamborina niaraka tamin'olona folo hafa i Mushtaq, ao anatin'izany ny mpanao sariitatra Ahmed Kabir Kishore sy ny mpikatroka Didarul Islam Bhuiyan, izay voampanga araka ny DSA ihany koa.
Vao haingana i Kishore no noafahana vonjimaika noho ny resaka fahasalamana ary niteny tao amin'ny antsafa (anterovava) nifanaovana tamin'i The Daily Star fa nampijaliana izy raha nohazonina mialoha fitsarana.
Bangladeshita iray hafa manana ny lazany nosamborina araka ny DSA ny mpaka sary fanao an-gazety Shafiqul Islam Kajol, izay nogadraina hatramin'ny volana mey 2020 ary noafahana vonjimaika (tamin'ny solofonja) tamin'ny Desambra 2020.
Vakio ihany koa: In Bangladesh, criticism of government response to the COVID-19 pandemic is risky
Fikambanana iraisampirenena miisa sivy ka ao anatin'izany ny Forum Aziatika ho amin'ny Zon'Olombelona sy ny Fampandrosoana, Ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona Aziatika, ary ny Federasiona Iraisampirenena ho amin'ny Zon'Olombelona no namoaka fanambaràna iraisany mitaky amin'ny governemanta ny hanesorana ny DSA.
Fanambarana voasoratra iray hafa avy amin'ny olom-pirenena fito izay nataon'ny DSA lasibatra teo aloha no mangataka ny fanafoanana azy. Ny hafa indray nanohitra izany an-jotra.
Nisioka ny Bangladeshita mpanoratra mpila ravin'ahitra Leesa Gazi:
Tsy maintsy ravaina ny DSA. Tokony hanaovana famotorana ny fanagadrana sy ny fahafatesan'i Mushtaq Ahmed ary tokony hotanana ho tompon'antoka ny manampahefana tompon'andraikitra
Nisioka ny mpilaza tantara Sajib Tanvir:
Maty any am-ponja i Mushtaq. Nalefa tany am-ponja noho ny Lalam-piarovana Nomerika 2018 (DSA) izy. Ny ‘helony’ dia tsy misy afa-tsy ny ‘fanoratany’. Iza no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany? Ireo namelona ny DSA izay nanery ny mpanoratra iray hiaina any am-ponja tao anatin'ny 9 volana ary maty tao tamin'ny farany.
Nisy tohivakan'olombelona nomerika nosantarin'ilay mpahay maritrano (Architecte) Sofia Karim, mpanangana ny TurbineBagh Art, nangataka tamin'ny vahoaka hamoaka sarin-dry zareo ahitana azy ireo mitazona sora-baventy mivaky hoe “justice for Mushtaq, Freedom for Kishore [rariny ho an'i Mushtaq, fahafahana ho an'i Kishore].”
Tamin'ny firesahany tamin'ny Global Voices tamin'ny alalan'ny imailaka no nilazan'i Karim:
Mety tsy hahataitra ny governemantan'i Bangladesh izay nataon-dry zareo tamin'i Mushtaq sy Kishore, fa mampihotakotaka ny mpijery avy amin'ny faritra maro kosa. Ny tohivakan'olombelona nomerika dia natao handraketana ny fihetsiketsehanay sy antso hanafahana an'i Kishore.
Natrehin'ny artista tamin'ny alalan'ny asakanto ny horohoro. Manaja anay rehetra ny artista raha manaja an'i Mushtaq sy Kishore. Ary manala baraka anay rehetra ny governemanta rehefa tsy manaja ny mpanoratra sy ny artista ao aminy.
Ho setrin'ny tsikera, nilaza ny manampahefana tamin'ny 2 marsa fa hiasa ny governemanta hanao fanitsiana fa amin'ny alalan'ny taratasy avy amin'ny fitsarana ihany no hanaovana fampisamborana.
Hatramin'ny taona 2018 no nitohy hatrany ny adihevitra tao Bangladesh amin'ny fiantraikan'ny DSA amin'ny fahalalaham-pitenenana sy gazety, toy ny ao amin'ny vondrona Facebook ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সেকাল-একাল (Lalam-piarovana Nomerika DSA tamin'izany-izao) sy ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন মানি না (Tsy ekenay ny Lalam-Piarovana Nomerika-Digital Security Act).
Mandritra izany fotoana izany, mampiasa ny zavakanto ny mpanao fihetsiketsehana hanehoany ny tsy fahafaham-pony amin'ny toe-draharaha.